I-Atrophic gastritis, izimpawu zazo ezibhekene ne- dyspepsia, ubuhlungu esifundeni se-epigastric, kubonakala sengathi isenzo se-autommune sokuvuvukala esiswini se-mucosa esiswini, esiza ukunciphisa ukutholakala okuvamile komzimba kwamaseli ngaphakathi kwe-mucosa esiswini. Ngenxa yalokho, izinguquko ze-atrophic ku-membrane, i-motor (peristaltic) kanye nezifo eziveza ukukhushulwa esiswini zenzeka . Njengoba isifo esinjalo njenge-gastritis ye-atrophic, izimpawu zalesi sifo zivame ukuvela eminyakeni yobudala kanye nasebekhulile. Ukusabela okuvuthayo kungabamba kuphela uhlaka lwe-epithélial kanye namadivayisi angenalutho, lungasakazeka nakuwo wonke ungqimba wamangqamuzana. Ezimweni ezimbi kunazo zonke, inqubo ingakwazi ukumboza izingxenyana ezithile zomzimba nezindlala zesisu.
I-Atrophic gastritis, izimpawu kanye nokubonakaliswa kwemitholampilo okungafani kakhulu, kuvela lapho kuboniswa izinto zangaphandle nezangaphakathi. Izimo ezivelele zihlanganisa: ukudla okungalungile nokungajwayelekile, iziphuzo ezidakayo, imithi yesikhathi eside nabanye. Izimbangela zangaphakathi (ezingapheliyo) ziyizifo ezingelapheki, izifo ezithinta izidumbu zezingxenye ezithintekayo ekugayeni, ukudakwa ngokweqile kokukhiqiza okulimazayo, ukulungiswa kwezifa.
I-gastritis gastroenterologists engapheli ihlukaniswe izinhlobo ezimbili: i-gastritis hlobo A ne-B. Chronic gastritis ye-atrophic ibhekisela kuhlobo lwe-gastritis. Leli fomu lesi sifo liboniswa ukuvuvukala okuzenzekelayo, okuholela ekukhiqizeni amasosha omzimba ekuhlanganiseni amaseli. Ngenxa yalokho, amaprotheni abo aphenduka izidakamizwa, ukuphendula kwamaselula nokuvuvukala kwekhanda elimangalisa kwenzeka. Isici esihlukile salesi gastritis yinkqubo ehloswe ngayo i-atrophy ye-membrane yamangqamuzana nokuncipha okuqhubekayo kwinani lamangqamuzana omzimba wesisu. Itholakala ikakhulu esifundeni sezansi nomzimba wesisu, futhi ikhulula i-antral atrophic gastritis. Ukukhanda kwe-mucosal kuphukile, ukwakheka kwejusi lomunwe kunciphisa.
Lapho kutholakala i-atrophic gastritis, izimpawu zibonakala ngokukhala kwezikhalazo zesiguli esingaziwa, esicindezelayo futhi esiqhubekayo esiswini, ukushaya inhliziyo, i-dyspepsia, ukuqhuma nokwandisa igesi, isakhiwo. Ukuqina kwemibonakalo kuncike kwinombolo yamaseli asebenzayo. Ngalesi sifo, ukwakheka kanye ne-asidi yesiphuzo esiswini somzimba sinciphisa. Ngenxa yalokho, uphawu oluyinhloko lwe-atrophic gastritis lubuhlungu besisu, umzwelo we-satiety emva kokudla okuncane okudliwe. Ngokuvamile, i-atrophic gastritis ihambisana nezinye izifo zesitho sokugaya: i-pancreatitis, i-dysbiosis emathunjini, i-cholecystitis. I-atrophy ye-mucosa ibangela ukwephulwa kokubanjwa kwe-vitamin B12, ngokuvamile kutholakala i-anemia ye-B12.
Izinyathelo zokuhlola ziyancipha ukuhlonza okungafani kahle phakathi kwezinhlobo ezikhona ze-gastritis. Isilinganiso esiyinhloko sokuxilongwa ukusetshenzwa kwe-fibroadastroduodenoscopy (FGS), ukuthatha i-biopsy (ucezu lwesitho somzimba). I-biopsy ngokuvamile ivame kusuka kumasayithi amaningana. Hlola umsebenzi we-secretory wesisu nokubunjwa kwejusi esiswini.
Ukwelashwa kwe-atrophic gastritis kuyinkimbinkimbi futhi ihlala njalo. Ihlose ukugcina ukukhiqizwa okujwayelekile kwesiphuzo esiswini, isic acid yayo. E-atrophy ephawulekayo, ukwelashwa okufakelwayo kwenziwa, okuchaza i-hydrochloric acid ekugxilweni kwezokwelapha. Isilinganiso esibophezelayo ukudla, ukudla okuyingxubevange. Ukwelashwa kwe-sanatoria ngemithombo yamaminerali kuyamukelwa.
Sandla ezintsheni, izimpawu
Yini okufanele ngiyenze uma indlebe yami igcwele amakhaza?